एएचएफ नेपालले मनायो दसौं वार्षिकोत्सव – indepth.com.np
एएचएफ नेपालले मनायो दसौं वार्षिकोत्सव
२० मंसिर २०७५, बिहीबार २२:१४
एएचएफ नेपालको दसौं वार्षिकोत्सवको उद्घाटन गर्दै एएचएफकी ग्लोबल एकाउन्टिङ तथा फाइनान्सियल अपरेसनका वरिष्ठ निर्देशक मार्गरेटा म्यारो र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल । तस्बिरहरु : ईश्वरकाजी खाइजू
काठमाडौं । एड्स हेल्थकेयर फाउन्डेसन (एएचएफ) नेपालले बिहीबार राजधानीमा आफ्नो सेवाको दसौं वार्षिकोत्सव मनाएको छ ।
कार्यक्रमको एएचएफकी ग्लोबल एकाउन्टिङ तथा फाइनान्सियल अपरेसनका वरिष्ठ निर्देशक मार्गरेटा म्यारो र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. सुशीलनाथ प्याकुरेलले विशेष समारोहबीच उद्घाटन गरेका छन् ।
उनीहरुले एएचएफ नेपालको दसौं वर्ष अंकित लोगो अनावरण गर्दै कार्यक्रमको उद्घाटन गरेका हुन् ।
उक्त अवसरमा स्वास्थ्य सचिव डा. प्याकुरेलले सबैले निर्धक्कसँग एचआईभीको जाँच गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु नेपालमा अझै चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।
नेपाली समाजमा विश्वास नबढाएसम्म एचआईभी संक्रमितहरुले भेदभाव तथा लाञ्छना भोगिरहनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
‘एचआईभीको क्षेत्रमा उपचारको पहुँच, उपचार गर्ने जनशक्ति तथा उपकरणको वृद्धि र गुणात्मक उपचारको प्रत्याभूति पहिलो आवश्यकता हो’, स्वास्थ्य सचिव प्याकुरेलले भने ।
एएचएफकी ग्लोबल एकाउन्टिङ तथा फाइनान्सियल अपरेसनका वरिष्ठ निर्देशक म्यारोले नेपाल सरकारको सहयोग र सहकार्यले नै नेपालमा एएचएफले आफ्नो दसौं वर्ष सफलतापूर्वक पार गरेको सुनाइन् ।
एचआईभी/एड्ससम्बन्धी पैरवी र प्रवद्र्धन तथा जनचेतना शिक्षा फैलाउने जाँच तथा उपचारमा एएचएफ सहकार्य गर्न सदैव तयार रहेको उनले बताइन् ।
कार्यक्रममा एएचएफ नेपालका राष्ट्रिय कार्यक्रम प्रवन्धक दीपक ढुंगेलले सन् २००९ मा टेकुस्थित सहिद शुक्रराज सरुवा रोग अस्पतालमा पहिलो एआरटी सेन्टर स्थापना गरेर सेवा सुरु गरेको एएचएफ नेपालले अहिले देशका १५ सरकारी अस्पतालबाट सेवा दिँदै आएको जानकारी दिए ।
उनले एएचएफले चालू आर्थिक वर्षभित्र एआरटी सेवा प्राप्त हुने अस्पतालको संख्या १८ पु¥याउने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए ।
‘एएचएफ नेपालले पहिलो एआरटी सेवा सुरु गर्दा २५ जना एचआईभी संक्रमित सहभागी भएका थिए’, राष्ट्रिय कार्यक्रम प्रवन्धक ढुंगेलले भने, ‘अहिले यो संख्या दस हजारको हाराहारीमा पुगेको छ ।’
उनले एचआईभी संक्रमित सबैलाई उपचारको पहुँचमा ल्याउन चुनौतीपूर्ण रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार एचआईभी संक्रमितमध्ये करिब ६० प्रतिशत नेपालीको मात्रै पहिचान भएको छ । त्यसमा पनि एकतिहाइ उपचारको पहुँचमा नआएको उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा सांगीतिकसँगै साहित्य प्रस्तुति गरिएको थियो । त्यस्तै एएचएफ नेपालको दस वर्षे अवधिमा भएका गतिविधि र उपलब्धि समेटिएको वृत्तचित्रसमेत प्रदर्शन गरिएको थियो ।
Related Topics:AHF NepalFeaturedSpecial
एएचएफकी वरिष्ठ निर्देशक म्यारो सुरुवातमा
४० वर्षपछि रामशेखरको धिं ताल्लको दोस्रो संस्करण सार्वजनिक